Search ပလေယာ စဆာံ`. - BajarFB.com
Search Results - ပလေယာ စဆာံ`.
ပလေယာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး စဆုံး Đãw Pýãê Lãÿ4Nov · 6.6K views
players (ပလောယာ) ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Official Trailer
“ပလေယာ” ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အလွမ်းအဆွေးလေးတွေကို ခဏဖယ် မြင့်မြတ်နဲ့ ဖုန်ရှုလိုက်ကြရအောင် အယ်….. ယောင်လို့ ပလေယာလိုက်ကြရအောင်!!!!! ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟ ရိုက်ကူးထားပြီး မြင့်မြတ် ထွန်းထွန်း ခင်လှိုင် ဂျိုကာ တိုင်ရွန် အေးချမ်းမောင် ကေညီ စိုးမြတ်သူဇာ အိချောပို ဆောင်းဝတ်ရည်မေ မေမီကိုကို နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ မြင့်မြတ်ကတော့ စော်ကြည်တဲ့ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်နဲ့ YBSဒရိုငျဘာလေး”မင်းထွန်း”ပါ…. မယူခင်ကြိတ်ချင်နေတဲ့ ထွန်းထွန်းနဲ့ လူမိုက်ဂိုက်ဖမ်းနေပေမယ့် မိန်းမကို တုန်နေအောင်ကြောက်ရတဲ့ ခင်လှိုင်၊ လက်သံပြောင်ပြီး အပီဆော်တဲ့ လူမိုက်ရဲ့ မိန်းမအဖြစ် စိုးမြတ်သူဇာတို့ ကြားထဲက ရယ်ရွှင်ဖွယ်တလွဲဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဇာတ်အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ရသမျိုးစုံခံစားရမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်ကွက်တွေကို ရင်သပ်ရှုမောစွာခံစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ လာမယ့် ၆.၂.၂၀၂၀ မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ပလေယာ(Player) ဇာတ်ကားကြီးကို လာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ ပရိသတ်ကြီးကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့ အိုက်တင်တွေမှာ ဘယ်လိုတွေခွီရဦးမလဲ!!! #PLAYER #TRAILER #CeleConnections Cele Connections 30 Jan 2020 · 295K views
ပလေယာ - 🅟🅛🅐🅨🅔🅡🅢 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မင်းထွန်း နှင့် လူလည် ကျော်ကြီးတို့တွေ့ကြသောအခါ ပလေယာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအား မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတွင် ဆက်လက်အောင်ပွဲခံ ပြသနေပါသည် ကဲ . . . လတ်မှတ်ကုန်တာလဲမြန်တာမလို့ မကြည့်ရသေးရင်တော့ လတ်မှတ်သာအမြန်လေးဝယ်ပြီး ပလေယာ ကြည့်ဖို့ Yadanar Cinema မှာ Ready လုပ်လိုက်တော့နော် 😍😍 🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌 ★彡ပလေယာ彡★ (ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး) #PLAYERS #ပေလယာ #BoBoFilmProduction Yadanar 3D Cinema 11 Feb 2020 · 631K views